कुवलाश्वद्वारा जगत्को रक्षा
काठमाडौँ । पूर्वकलामा धुन्धु नामका राक्षस थिए। ब्रह्माबाट वरदान पाइएर उनी देवता, दानव, प्रेत, नाग, गन्धर्व र राक्षसहरूलाई अधीनमा राखे । उनले तीन लोकलाई जितेर अधीनमा राखेका थिए । उनी अहङ्कारको पुलिन्दा थिए, त्यसैले आफूलाई सधैँ अमरवशमा राखे र सधैँ सबैलाई सताउँथे। अन्तमा, उनको दिमागमा एक भयानक विचार उत्पन्न भयो। उनी सारा संसारलाई नष्ट गर्न तत्पर भए। यसका लागि उज्जालक नामको मरुभूमिमा तपस्या गर्न थाले।
आफ्ना अनुयायीहरूसँग, उनले बालुवाको पहाड हटाई जमिनमा सुतेर आफूमाथि बालुवा लगाएर डुबे। तब प्राणायामको अभ्यासबाट उनले गाह्रो तपस्या सुरु गरे। उनको गहन तपस्या एक मात्र उद्देश्य थियो - संसारको विनाश।
यस तपस्याको समयमा समेत उनले जीवहरूलाई सताउने काम रोकिएनन्। जब उनी वर्षको अन्त्यमा श्वास छोड्थे, तब चारै तर्फ आगोको तप्काहरू झर्थ्यो , भयानक भूकम्प आउँथ्यो, सारा पृथ्वी सात दिनसम्म डगमगाउँथ्यो, पूरा आकाश धुवाँ धुवाँले ढाकिएको थियो। सबै प्राणीहरू विपत्तिजनक कार्यहरूदेखि डराउँथे। धेरै मर्ने पनि गर्थे।
उत्तरका मुनिको आश्रम मारवाडमा थियो, त्यसैले उनी अत्यन्त प्रभावित भए। उनले संसारको रक्षाका लागि अघि बढे। उनी राजा बृहदश्व भएको ठाउँमा पुगे। उनले भने - 'राजन! यदि तपाईँ धुन्धु कोमारको वध गर्नु भएन भने यसले सम्पूर्ण विश्वलाई नष्ट गर्दछ। केवल तपाईँले मात्र उसलाई मार्न सक्नुहुन्छ। एउटा तपाईँ आफैँमा सक्षम हुनुहुन्छ, अर्को म मेरो प्रथानाथबाट भगवान् विष्णुले आफ्नो प्रकट गर्नुहुनेछ। ' त्यस बेला, राजा बृहदश्व आफ्नो छोरा कुवलाश्वालाई राज्य अभिषेक गरेर जङ्गलमा जाँदै थिए। उनले उत्तंक मुनिसँग भने, "मुनिवर! तपाईँको विचार एकदम उत्तम छ। त्यो काममा गर्न पनि आवश्यक छ, तर अब मेरो छोरो कुवलाश्वले त्यो काम गर्नेछन्; किनकि मैले वानप्रस्थ आश्रमका लागि अस्त्र शस्त्र त्यागेको छु। '
कुवलाश्वेले आफ्नो बुबाको यो आदेश स्वीकार गरे। उसको मन विश्वको हितको भावनाले भरिएको थियो। उनी आफ्ना छोरा र सेनाहरूसँग युद्ध गर्न निस्किए। उत्तंक मुनि पनि उनीसँगै थिए। यस अवसरमा भगवान् विष्णु आफ्नो तेज स्वरूपमा कुवलाश्वा प्रविष्ट हुनुभयो। संसारमा खुसीको लहर थियो। प्रार्थना बिना नै, देवताहरूको आवाज लाग्यो। आकाशबाट फूलहरू वृष्टि गरिरहेका थिए । सम्पूर्ण वातावरण ईश्वरीय गन्धले सुगन्धित थियो । हावा अनुकूल प्रवाह हुन थाल्यो।
कुवलाश्व दल बलसँग धुन्धु भएको ठाउँमा पुगे। त्यहाँ बालुवाको समुद्र बाहेक केही थिएन। कडा परिश्रमका साथ बालुवाको त्यो समुद्र खन्न थालियो । उत्खनन सात दिनको प्रयास पछि पूरा भयो। तब अनुयायीहरूसँग धन्धु देखिए । उनको स्वरूप निकै विकराल थियो। कुवलाश्वका छोराहरूले उनलाई घेरे र उनमाथि हमला गरे। धुंधु रिसाए र उनीहरूका सबै अस्त्र-शस्त्रहरू चबाए। त्यस पछि, उनले मुखबाट प्रलयकारी अग्निको गोला निकाल्न थाले । छोटो समयमै, कुवलाश्वका २१ हजार छोराको जलेर मृत्यु भयो।
तीन जना छोरा मात्र बाँचे । यो देखेर, राजा कुवलाश्व धुन्धुमाथि खनिए। यस पटक धुन्धुले अपार जलराशी प्रकट गरे । महाबली कुवालाश्वेले आग्नेयास्त्रको प्रयोग गरेर वध गरे । त्यस बेलादेखि कुवलाश्व धुन्धुमाराको रूपमा प्रख्यात भए। (वायुपुराण)